कम पढ्नु भएको छ ? यी तालीम लिनुहोस्, स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्नुहोस्
जागिर खोज्न गयो पढाइ र अनुभव सोधिन्छ । कम पढेका र अनुभव नभएकाहरुले के गर्ने? केहि व्यवसाय आफैं गरौँ न त भन्ने योजना बनायो भने पनि कुनै सी प जानेको छैन । कुनै सीप सिकौैँ न भन्दा पनि कहाँ सिक्ने र सिक्दा कति पैसा लाग्छ? त्यो पनि थाहा छैन । यी यावत् समस्याहरूबाट आजित हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क हुन्होस्, अब निशुल्क रुपमा तालीम लिनुहोस् र कर्मचारी हैन आफैं रोजगारदाता बन्नुहोस् ।
‘सिप सिकौँ आत्मनिर्भर बनौँ’ भन्ने नारासहित घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गतको प्रशिक्षण केन्द्रले साधारण लेखपढ मात्र गर्न जान्नेहरूलाई केन्द्रीत गरी भिन्न समयमा विभिन्न तालीमहरू निशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आएको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्षको हरेक चार­चार महीनामा तालीमहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
सोहि अनुसार केन्द्रले सीप सिक्न चाहनेहरूको लागि आवेदनको माग गरेको छ ।
केन्द्रले पहिलो पटक सीप सिक्न खोज्नेहरूका लागि सीपमूलक (आधारभूत) तथा पहिले नै केही सीप सिकेकाहरुका लागि सीप अभिवृद्धि (एडभान्स) गरी दुई थरीका तालीमहरू प्रदान गर्ने गरेको केन्द्रका प्रमुख गोपाललाल अमात्यले बताए ।
अमात्यका अनुसार उद्यमशीलता सिकाउने यी तालीमहरूको मूख्य उद्धेश्य भनेको जागिर खोजी रहेकाहरुलाई आफैं रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनु रहेको छ ।
उनले भने, ‘हामीले दिने तालीमको उद्धेश्य भनेकै ‘जब सिकर’ लाई ‘जब क्रियटर’ मा रुपान्तरण गर्नु हो । त्यसैले यहाँबाट राम्रोसँग सिकेर गएकाहरुले काम पाइएन भनेर फर्केको हामीले देखेका छैनौँ । उनीहरू आफँैले धेरै रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।’
अमात्यले केन्द्र तथा अन्य संस्थाबाट यस्तै किसिमका तालीम लिएमा मासिक रुपमा सहजै ३० हजारदेखि माथि कमाई गर्न सकिने बताउँछन् ।
उनले धेरै कमाउने सपनाले विदेश जान लालहित हुने युवाहरुलाई सीप सिकेर यहीं धेरै आर्जन गर्न सक्ने प्रशस्त आधार रहेको समेत जनाए ।
केन्द्रले हाल १० दिनदेखि ३ महीनासम्मको अवधिमा आर्जन गर्न सकिने सीप सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।
केन्द्रले प्रदान गर्ने तालीमहरूमा साधारण प्याट्रन सिलाई कटाई, हाते तथा मेसिन ईम्ब्रोइडरी, मखमल जुत्ता, डल बनाउने, खाद्य प्रशोधन तथा बेकरी उत्पादन सिक्न साधारण लेखपढ भए पुग्छ भने मोबाइल तथा मोटरसाइकल मर्मत, प्लम्बिङ्ग र हाउस वारिङ्गका लागि भने दश कक्षा पास गरेको योग्यता आवश्यक पर्छ ।
त्यस्तै सीप अभिवृद्धि गर्ने तालीम लिन भने प्याट्रन सिलाई कटाईमा ३ महीनाको तथा फेसन डिजाईनसम्बन्धी ६ महीने तालीम लिएको हुनुपर्नेछ।
तालीमका लागि केन्द्रले लिने मौखिक परीक्षा उर्तिर्ण गर्नुपर्छ भने आवेदन फाराम घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
आवेदन फाराम भदौ १ गतेभित्र बुझाइसक्नु पर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २०, २०७४, ०५:५१:०५